कहिले बाँडफाँड हुँदैछ तामाकोशीको आईपिओ ,कति कित्ता पर्ला भागमा ?::Hamrodamak.com
कहिले बाँडफाँड हुँदैछ तामाकोशीको आईपिओ ,कति कित्ता पर्ला भागमा ?
काठमाडौँ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजन आईपिओ मंसिर ११ गते बाँडफाँडको हुने भएको छ । तामाकोशीको शेयर बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष तथा सनराइज क्यापिटलले धितोपत्र बोर्डसँगको छलफलपछि सो मिति निर्धारण गरेको हो
यसअघि सञ्चयकोषका बचतकर्ता, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिको शेयरमा आवेदन गरिसकेका शेयरधनीले पनि आवेदन गरेका कारण शेयर बाँडफाँडमा ढिलाई भएको हो ।
बिक्री प्रबन्धककका अनुसार दोहोरो आवेदन गर्नेहरुको आवेदन स्वत रद्ध हुनेछ। नाम थर स्पष्ट नभएको, हितग्राही खाता भर्न छुटेका तथा ठेगाना स्पष्ट नभएका नभएका आवेदक पनि शेयर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।
सर्वसाधारणमा निष्काशन गरेको एक करोड ५० लाख ९० हजार ७५० कित्ता शेयरका लागि ३ लाख ४६ हजार बढीले आवेदनबाट ६ करोड ७० लाख कित्ता शेयर माग भएको छ ।
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार शेयर आवेदन गर्ने सबैलाई न्यूनतम दश कित्ता शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार कम्पनीको शेयर सबै आवेदकलाई न्यूनतम ४० कित्ता बाँडफाँड हुनेछ । अधिकतम प्राप्त गर्नेले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता गरि कूल ५० कित्ता पाउनेछन् ।